Mmekọrịta dị n'etiti ọgụgụ isi mmiri na ọrụ onye isi | Ọzụzụ nghọta
Anyị ekwuola ọtụtụ okwu ọgụgụ isi na nke ndi isi oru, ọbụna na -akọwa nyocha nke gaara eme ka ọ pụta ìhè ụfọdụ dị iche iche dị mkpa.
Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, ọ bụ ihe a na -apụghị izere ezere ịhụ ụfọdụ nhata n'etiti nkọwa nke usoro iwu arụmụka abụọ; dịka ọmụmaatụ, a na-eji usoro nhazi na nka idozi nsogbu n'usoro echiche dị iche iche na nkọwa nke ọrụ onye isi. Agbanyeghị, ikike abụọ a na -enyekarị aka n'ịkọwa akparamagwa anyị na -akọwakarị dị ka "onye nwere ọgụgụ isi".
N'iburu myirịta a dị n'etiti ọgụgụ isi na ọrụ onye isi, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịtụ anya na nke ikpeazụ ga -ebu amụma nke mbụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị kwesịrị ịtụ anya na ka arụmọrụ n'ule iji tụọ ọrụ ndị isi na -abawanye, a na -enwe mmụba nke akara na ule iji nyochaa ọgụgụ isi.
N'ihe gbasara ule maka ọrụ onye isi, ọtụtụ ndị edemede na -akọwapụta na nnwale ndị na -enyocha ha site na ọrụ doro anya siri ike (dịka ọmụmaatụ, Nnwale nnwale Wisconsin ma ọ bụ Tower nke Hanoi), ha enweghị ntụkwasị obi na izi ezi. Otu n'ime mbọ kacha mara amara iji nwaa ịkwụsị nsogbu a bụ nke Miyake na ndị ọrụ ibe ya ndị nwara imebi ọrụ ndị ọrụ ka ọ bụrụ akụkụ dị mfe yana, kpomkwem, atọ:
mmelite nke ebe nchekwa;
mgbanwe mgbanwe echiche;
Site n'ọmụmụ ihe ama ama nke emere na ndị okenye mahadum, otu ndị nyocha ahụ akọwaala etu esi ejikọ nka atọ a mana ọ ga-abụkwa nkewapụrụ, na-egosikwa na ha ga-enwe ike ibu amụma ịrụ ọrụ dị mgbagwoju anya (dịka ọmụmaatụ, Tower nke Hanoi na Nnwale nnwale Wisconsin).
Duan na ndị ọrụ ibe ya na 2010 ha kpebiri inwale ụdị Miyake kwa n'oge mmepe yana, kpomkwem, na ndị nọ n'agbata afọ 11 na 12. Ebumnuche bụ ileba anya ma nhazi ọrụ ndị isi yiri ihe achọtara na ndị okenye, ya bụ, nwere ihe atọ (mgbochi, mmelite ebe nchekwa ọrụ na mgbanwe) nke metụtara ibe ha mana ọ ka dị iche.
Ebumnuche ọzọ bụ tụọ ka ọrụ ndị isi siri kọwaa ọgụgụ isi mmiri.
Iji mee nke a, ndị ode akwụkwọ nyochara mmadụ 61 nyocha nyocha ọgụgụ isi site Matati na-aga n'ihu, na ntule nke ọrụ ọgụgụ isi n'ime ihe atọ a kpọtụrụ aha.
N'ihe gbasara ebumnobi nke mbụ, nsonaazụ ya kwadoro ihe ndị a tụrụ anya ya: akụkụ atọ a tụrụ atụ nke ọrụ onye isi nwere njikọ mana ọ ka nwere ikewapụ, si otu a na -emepụtagharị, n'ime ndị ka tọrọ, nsonaazụ Miyake na ndị ọrụ ibe bipụtara afọ iri gara aga.
Agbanyeghị, ikekwe ọ bụ ihe na -atọ ụtọ bụ ndị metụtara ajụjụ nke abụọ: kedu akụkụ ọrụ ndị ọrụ kọwara ọtụtụ ihe metụtara ọgụgụ isi mmiri?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ule niile maka ọrụ ndị isi gosipụtara mmekọrịta dị mkpa (ha na -aga ije n'aka) na akara na ule ọgụgụ isi. Agbanyeghị, site na 'imezi' ụkpụrụ maka ogo mmekorita dị n'etiti mgbochi, mgbanwe na imelite ebe nchekwa ọrụ, naanị nke ikpeazụ ka jikọtara nke ọma na ọgụgụ isi mmiri (na -akọwa ihe dịka 35%).
Ọ bụ ezie na a na -ejikọkarị ya na ndekọ ọnụ ọgụgụ, ọgụgụ isi na ọrụ onye isi na -aga n'ihu na -apụta dị ka ihe nrụpụta abụọ dị iche iche (ma ọ bụ, opekata mpe, nnwale ndị a na -eji enyocha otu ma ọ bụ nke ọzọ yiri ka ọ na -atụle ike dị iche iche). Agbanyeghị, mmelite nke ebe nchekwa na -arụ ọrụ yiri ka ọ bụ akụkụ nke ọrụ ndị ọrụ nwere njikọ chiri anya na ọgụgụ isi. Agbanyeghị, tupu anyị aghọgbuo onwe anyị na ajụjụ a dị nfe (ikekwe na -eche na ebe nchekwa na -arụ ọrụ dị ka ọgụgụ isi dị ala yana nke ọzọ), ọ bara uru ịtụle na n'omume ndị ọzọ na -abụghị nke "nkezi", ihe na -agbagha nke ukwuu. Dịka ọmụmaatụ, na nsogbu mmụta akọwapụtara nke ọma, akara ebe nchekwa na -arụ ọrụ apụtaghị na ọ nwere njikọ chiri anya na IQ. Ya mere, ọ dị mkpa ịtụle data sitere na nyocha a dị ka nri dị mkpa maka iche echiche, na -akpachapụ anya karịa ịsọ ọsọ na nkwubi okwu.
Gịnị bụ ebe nchekwa?
Kedu ihe bụ ọgụgụ isi na otu ule IQ si arụ ọrụ
Ụmụaka nwere onyinye: mata ọdịiche dị n'etiti ọgụgụ isi na ọrụ onye isi
Mmetụta nke IQ na arụmọrụ agụmakwụkwọ: site na mmalite ruo na njedebe nke ụlọ akwụkwọ
Oru mmuta a na-emetụta ọkwa ọgụgụ isi?
Ọgụgụ isi, nlebara anya na arụmọrụ agụmakwụkwọ: gịnị n'ezie dị mkpa?
Dịkwuo ebe nchekwa ọrụ ka ịbawanye ọgụgụ isi: ọ na -arụ ọrụ n'ezie?
Studyingmụ egwu na-eme ka ị mara ihe?
Duan, X., Wei, S., Wang, G., & Shi, J. (2010). Mmekọrịta dị n'etiti ọrụ onye isi na ọgụgụ isi na ụmụaka dị afọ 11 ruo 12. Nnwale Uche na Nlele Ntụle, 52(4), 419.
Giofrè, D., & Cornoldi, C. (2015). Ọdịdị nke ọgụgụ isi na ụmụaka nwere nkwarụ mmụta dị iche dị iche ma e jiri ya tụnyere ụmụaka na -etolite etolite. ọgụgụ isi, 52, 36-43.
Miyake, A., Friedman, NP, Emerson, MJ, Witzki, AH, Howerter, A., & Wager, TD (2000). Ịdị n'otu na ịdị iche iche nke ọrụ onye isi na ntinye aka ha na ọrụ mgbagwoju anya "frontbe lobe": nyocha na -agbanwe agbanwe. Ọgụgụ isi, 41(1), 49-100.
ndi isi oru, ọgụgụ isi, ọgụgụ isi na ọrụ ndị isi, ebe nchekwa, ebe nchekwa na ọgụgụ isi, ebe nchekwa ọrụ na IQ, qi
Njikọ dị n'etiti ọgụgụ isi mmiri na ọrụ onye isi2021-08-222021-08-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/la-relazione-tra-intelligenza-e-funzioni-esecutive.jpg200px200px
Ọrụ ndị isi “mmemme”: mmetụta nke itinye koodu na nhazi na mgbochi n’oge afọ akwụkwọỌrụ ndị isi, ọrụ ndị isi, Neuropsychology, Ngalaba
Ọrụ ndị isi jụrụ oyi na ndị na -ekpo ọkụ: gịnị ka ha na -ebu amụma dị iche na ibe ha?Edemede, ọrụ ndị isi, ọrụ ndị isi, ebe nchekwa na -arụ ọrụ